Isitimela - Hengyi Electrical Co., Ltd.
Uhlelo lokuphakelwa kwamandla kagesi wesitimela lisebenzisa amayunithi wokulungisa ukuhlinzeka ngamandla we-DC kuma-EMU, ngakho-ke ama-harmoniki awanakugwemeka. Lapho okuqukethwe kwe-harmonic kudlula ibanga elithile, kungadala ukulimala kuhlelo lwamandla asemadolobheni. Ngaphezu kwalokho, ukukhanyisa, i-UPS, amakheshi ikakhulukazi akhiqiza ama-3, 5, 7, 11, 13 namanye ama-harmoniki. Futhi amandla okulayisha makhulu, namandla asebenzayo makhulu futhi.
IHarmonics ibangela ukuthi ukuvikeleka kokudluliswa kanye namadivayisi we-othomathikhi wesistimu yamandla kungasebenzi noma kunqabe ukusebenza, okubeka ngqo ukusebenza okuphephile kwegridi yamandla; kubangela imishini kagesi ehlukahlukene ukukhiqiza ukulahleka okwengeziwe nokushisa, futhi kubangele ukuthi imoto ikhiqize ukudlidliza komshini nomsindo. Okwamanje i-harmonic ikugridi yamandla. Njengohlobo lwamandla, ekugcineni izodliwa emigqeni nakwimishini kagesi ehlukahlukene, ngaleyo ndlela kwande ukulahleka, amandla asebenzayo ngokweqile nama-harmoniki, okuholele ekwandeni kokulahleka kwe-transformer nokuncipha kokusebenza, futhi kuzohlanganiswa nohlangothi olunamandla amakhulu, kubangele okukhulu kakhulu -izinkinga zekhwalithi yamandla.
Imishini yokukhanyisa, i-UPS, amafeni, kanye namakheshi akhiqiza imisinga ye-harmonic, edala ukuphazamiseka kwamandla. Ngasikhathi sinye, imisinga ye-harmonic izohanjiswa ohlangothini lwamandla aphezulu nge-transformer. Ngemuva kokuthi isihlungi esisebenzayo (i-HYAPF) sifakiwe, isihlungi sizokhipha i-current enxephezelayo nge-amplitude efanayo kodwa ama-engeli esigaba esiphambene nama-harmoniki atholakele. Igridi yamandla ilinganiswa ne-load harmonics ukufeza inhloso yokuhlunga nokuhlanza igridi yamandla, enganciphisa ngempumelelo izinga lokwehluleka kwemishini. Izihlungi zamandla ezisebenzayo zinokusebenza okungcono kunezihlungi zendabuko, zinganxephezela ngamandla ama-harmonics, futhi azithambekele kakhulu ekuvezeni umsindo.